AutoDesk horeba waxay leedahay Google Earth - Geofumadas
AutoDesk horeba waxay leedahay Google Earth
Ogast, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps
AutoDesk waxay go'aansatay in ay gasho 3D muuqaalka, ma aha in aysan haysanin, laakiin mawduucaasu wuxuu ahaa mid su'aalo badan leh sababtoo ah isticmaalka ilaha dhaqaalaha.
Marka aad iibsaneyso 3D Geo AutoDesk waxaa lagu dhejiyay meel wanaagsan sababtoo ah tiknoolajiyadaan (Google style style) waa mid aad u xoogan oo aan ahayn ujeedooyin muuqaal ah laakiin sidoo kale sameynta adeegga shabakadda. 3D Geo waa xariiq aad u awood badan oo aan ahayn dhismaha, laakiin sidoo kale waa goob juquraafi ah oo ay ku jiraan qorshaynta dhuleed, dalxiis, gaadiid iyo dalabyo kale.
Kiiska Moodooyinka 3D-magaalada waa qaybo badan oo ka mid ah kaabayaasha xogta juqraafi (GDI) taas oo ka dhigan waxqabadka hawlaha fudud ee loo marayo horumarinta adeegyada webka.
LandXplorer 3D Geoserver Waxay leedahay xalal ma aha oo keliya si wax ku ool ah u adeegaya qadar tiro badan oo xogta juquraafi ah, laakiin sidoo kale codsiyada macaamiisha. Waxa kale oo ka mid ah qalab wax lagu qoro oo loogu talagalay horumarinta 3D moodooyinka 'virtual'.
LandXplorer CityGML Istuudiyadu waxay bixisaa qalabyo iyo shaqooyin shaqsi ahaaneed iyo maareynta xogta, oo ay ku jiraan xuquuqda saxiixa digital.
Module Aqoonsiga Smart Waxay u oggolaanaysaa abuuritaanka xaalado qorshe wax ku ool ah, sida falanqaynta muraayada dhulka, xuduudaha xuduudaha, isgaarsiinta macluumaadka ama ololeyaal macluumaad ah oo raadinaya ka qaybgalka dadka isticmaala iyo muuqaalkaba waxaa lagu dhajin karaa xogta ama ka soo galaan Google Earth. Waxaad xitaa soo saari kartaa xogta qaababka la qaadi karo iyadoo la isticmaalayo qalab loo yaqaan 'Pack & & Go' kaas oo soo koobaya dhammaan macluumaadka ku jira qaabka oo lagu sawiray mashiinka LandXloader ama LandXlorer City GML Studio.
LandXplorer Viewer waa sawir-qaadaha qaabka Google Earth oo lacag la'aan ah, oo ku saleysan adeega shabakadda halkaasoo 3D-magaalo ama 3D-qaabab muuqaal ah loo diri karo. Farqiga u dhexeeya geedi-socodka sida qalabkan waxay u adeegaan xogta iyo habka dhaqameed ee xalalka hadda jira ee AutoDesk waa in hadda ay ka shaqeeyaan hoos-u-dejinta webka inta uu jirkoodu ahaa qaababka 3D iyada oo la adeegsanayo sheyga riwaayadaha.
Waxaan u maleyneynaa in AutoDesk ay isku xirayso codsiyada kale ee 3D sida Maya, Map3D, MapGuide, Architecture, 3Dx Max iyo kuwo kale. Inkasta oo ay jiraan wax laga filayo Sawirka Sawirka iyo Muuqaal Sawir leh dhawaan ayaa lagu dhawaaqay.
Post Previous«Previous 7 koorsooyin bilaash ah oo internetka ah
Post Next :(Next »
2 Jawaab "AutoDesk horey u leedahay Google Earth"
Agoosto, 2008 at
Waa hagaag, waxaan arki doonaa waxa AutoDesk la sameeyo qalabka ciyaarta
Qalabka iibka ee 3D Geo iyo alaabta LandXplorer. 3D Geo waa gabadha ku dhalata Jaamacadda Dresden. Waxaan la kulmay isaga at Intergeo lagu qabtay Leipzig ee October 2007, waxaan ka tagay codsi shati qiimaynta inaan tijaabiyo oo aan helin wax natiijooyin ah macluumaadka aan. Imtixaanka aan sameynayo wuxuu ahaa inuu si toos ah uga helo muraayadda macluumaadka LiDAR iyo faylka qaabka leh dhismooyinka dhismaha. Waxaa la aaminsan yahay in codsigu yahay tan, laakiin sida muuqata keliya macluumaadkaaga demo !!!!